एमालेमा थपियो अर्को विवाद, अष्टलक्ष्मी शाक्य र केपी
काठमाडौँ- एमालेमा विवाद देखिएको छ। वडा र पालिका अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा तोकिएको समयमा नै गर्ने कि सार्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको हो । विधान अधिवेशनले कार्तिक ६ गते
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । बैठक केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा बसिरहेको छ । पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि गर्नुपर्ने तल्ला तहका सम्मेलनहरुको कार्यतालिका तय गर्न बैठक बोलाइएको हो
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा समस्या पर्ने भएको छ । चितवन कांग्रेसले प्रचण्डलाई चुनावमा सहयोग नगर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति
चितवन- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासीमाथि गोली चलाउने काम गलत भएको बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले सुकुम्बासीमाथि गोली चलाउनु दुखद भएको बताए । रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक
काठमाडौ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अगामी १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् । विजया दशमी, दिपावली, छठलगायतका चाडपर्वका अवसरमा पत्रकारसँग आइतबार काठमाडौंमा भेटघाट गर्दै
काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फेरि जिल्ला अधिवेशन गर्ने समय थप गरेको छ । राप्रपाले तोकिएको समयमा जिल्ला अधिवेशन गर्न नसकेपनि फेरि म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी
संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर जनमोर्चा आन्दोलनमा, सात सहरमा प्रदर्शन
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीसहितका माग राख्दै नेपालका मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रकै दल जनमोर्चा अहिले विभिन्न माग लिएर सडकमा आन्दोलित छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित भए पूर्वमन्त्री घिमिरे
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । केहि लक्षणहरूले कांग्रेस अब युवाको हातमा जानसक्ने देखिएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अहिलेको महाधिवेशनले कांग्रेसमा फरक अनुहार देखिने संकेत गरेको छ
भीम रावललाई एमालेमा किन गरियो हेला ?
काठमाडौं- नेकपा एमालले प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरिएको हो । अध्यक्ष मण्डलमा उपाध्यक्षहरु युवराज
ओलीले भने: संसद विघटन गर्ने हो भने देउवालाई साथ दिन्छु
काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रस्ताव गरेका छन् ।
काठमाडौं- गत असार २७ गते गरिएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १० मध्यमार्गी नेताहरूबीच नै फूट आएको छ । गत शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म
आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डसँग बादल भिड्ने
काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आगामी निर्वाचन लड्न तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ